WHO: Sida la isaga ilaaliyo feyruska Karona | Radio Himilo
Home / COVID 19 / WHO: Sida la isaga ilaaliyo feyruska Karona
WHO: Sida la isaga ilaaliyo feyruska Karona
Posted by: Sadia Nour October 24, 2020
Himilo – Maadaama uu cudurka Covid-19 ee soo gaaray dalka bartamihii bishii Maarso ee sanadkan, wuu kusii fidayo bulshadeena, taxadar adiga oo raacaya tillaabooyinka soo socda oo ay ku talisay Hay’adda caafimaadka dunida ee WHO.
U jirso dadka kale fogaan dhan ugu yaraan hal mitir, si aadan u qaadin Feyruska marka ruux qaba oo kuu dhaw uu hindhiso, qufaco amaba hadlo. Joogtey dhaqankan xittaa haddii aad joogto guriga sababtoo ah kala fogaanshiya ayaa wanaagsan waqtigan.
Hubi inaad xirato Af-saab, marka aad u baxeyso banaanka oo aad tageeyso meel ay isugu imaan karaan dad badan amaba aad raaceyso gaadiidka dadweynaha ayuu aad muhiim u yahay.
Dhaqo gacamaha mar waliba, xittaa marka aad xiraneyso amaba aad iska bixineyso Af-saabka.
Ka fogow in gacantaadu taabataa afka, Sanka ama Isha adiga oo aanan faraxalan, waxaa suuragal ah inay sido feyruska sababa xanuunka Covid-19.
Dadka kulankooda uu muhiim kuu ah kula kulan meel ka baxsan guriga, sababtoo ah isu imaatinka banaanka ayaa ka badbaado fiican kan gudaha.
Haddii ay dhacdo inaad isku aragto astaamaha Covid-19 sida Qandho, Qufac qalalan, Daal iyo kuwa naadirka ah ku sugnow guriga oo is karantiil, kaddibna la xiriir hawl-wadeenada caafimaadka haddii ay sii liidato xaaladaada.
Taxadar oo raac talooyinka dhaqaatiirta allena haku badbaadiyo.
Previous: Cuno kariyihii ku kali noqday maqaayadda
Next: Brandon Berridge: Dab damiyaha ugu dheer caalamka
80 jir meel ku xifdiyay Saabuun jirta 100 sano